Turkiga ayaa ciidamo nabad ilaalin ah u diraya Azerbaijan -
Home News Turkiga ayaa ciidamo nabad ilaalin ah u diraya Azerbaijan
Turkiga ayaa ciidamo nabad ilaalin ah u diraya Azerbaijan
Baarlamaanka Turkiga ayaa Talaadadii u oggolaaday dowladda Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan inay ciidamo nabad ilaalin ah geeyso Azerbaijan si ay ula socdaan heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya Azerbaijan iyo Armenia oo looga gol leeyahay in lagu soo afjaro khilaafka gobolka.
Gacan qaad, xildhibaannadu waxay u codeeyeen muddo hal sano ah oo u oggolaanaysa dawladda inay ciidamo u dirto Azerbaijan, halkaas oo ay ku indha indheyn doonaan xadgudubyada xabad joojinta ee ka imaan kara xarun kormeer wadajir ah oo ay wadaagaan Turkiga iyo Ruushka. Xabad joojinta ayaa soo afjartay lix todobaad oo dagaal qaraar uu u dhaxeeyay Azerbaijan iyo Armenia oo ku saabsanaa gobolka Nagorno-Karabakh.
Dowlada Erdogan ayaa go’aansan laheyd tirada ciidamada loo dirayo lamana oga inta dal ee qorsheyneysa in la geeyo. Dhaqdhaqaaqa wuxuu sheegayaa in shaqaalaha rayidka sidoo kale la geyn karo qayb ka mid ah howlaha nabad ilaalinta.
Toddobaadkii hore, wasiirrada gaashaandhigga ee Ruushka iyo Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad ah oo lagu aasaasayo xarun kormeer wadajir ah oo ku taal Azerbaijan, in kasta oo faahfaahinta farsamada ee howlgalka weli la shaqeynayo.
Azerbaijan waxay dabada ka riixaysay xulafadeeda Turkiga, oo ka taageertay Baku dagaalada, inay door firfircoon ka qaadato wadahadalada nabada waxayna ahayd tii ugu horaysay ee shaacisa sida ay uga go’antahay la socodka heshiiska xabad joojinta.
Saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in ka qeyb qaadashada Ankara ay ku koobnaan doonto shaqada xarunta la socodka ee dhulka Azerbaijani, ciidamada nabad ilaalinta ee Turkiga ma aadi doonaan Nagorno-Karabakh. Wasiirka Arimaha Dibada ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in xaruntani ay ku shaqeyn doonto meel fog iyadoo la adeegsan doono diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyo habab kale oo farsamo si loola socdo xadgudubyada dhici kara.
Waajibaadka ayaa sii dheereynaya ka-qaybgalka milatari ee Turkiga illaa Bariga Dhexe illaa Afrika.
Waddankan, oo doonayey inuu door ka ciyaaro sidii awood gobol, ayaa ciidamo u diray Ciraaq iyo Suuriya si ay ula dagaallamaan xagjiriinta Kurdiyiinta iyo Liibiya halkaas oo joogitaankeeda ay gacan ka geysatay beddelidda isku dheelitirka khilaafaadka halkaas ka jira oo ay taageerto dowladda fadhigeedu yahay Tripoli.
Ankara sidoo kale waxay joogtaa joogitaan ciidan oo ay ku leedahay Qadar, Soomaaliya iyo Qubrus waxayna leedahay ciidamo nabad ilaalin ah Afghanistan, Lubnaan, Afrika iyo Balkans.
Soo jeedinta ah in la geeyo Azerbaijan waxaa taageeray afar ka mid ah shantii xisbi ee baarlamaanka Turkiga. Dowladda Erdogan waxay sheegtay in ciidamada nabad ilaalinta ee Turkiga ay muhiim u ahaayeen nabadda iyo barwaaqada gobolka iyo danaha qaran ee Turkiga.
“Turkiga iyo Azerbaijan, oo isu arka inay yihiin hal dal iyo laba qof, waxay sii wadi doonaan inay si wada jir ah ugu dagaallamaan madaxbannaanidooda iyo mustaqbalkooda,” ayuu yiri Ismet Yilmaz, oo ah guddoomiyaha Guddiga Difaaca ee Baarlamaanka.
“Waa masuuliyadeena taariikheed iyo istiraatiijiyadeed inaan hubino in (ciidamada Turkiga) ay gutaan waajibaadkooda Xarunta Wadajirka ah si ay u ilaaliyaan xabad joojinta ugana hortagaan xadgudubyada.”
Ahad Andican, oo ah xildhibaan ka tirsan mucaaradka wadaniga ah ee Good Party, ayaa sheegay in joogitaanka ciidamada Turkiga ay ka caawin doonto ka hortaga isku dayga Armenia ee ah “hub”.
Ruushka oo kala xaajooday xabad joojinta ayaa u diraya ilaa 2000 oo askari oo nabad ilaalin ah muddo shan sano ah.
Nagorno-Karabakh waxay ku taalaa Azerbaijan laakiin waxaa gacanta ku hayey xoogaga qowmiyadaha Armenia oo taageero ka helaya Armenia tan iyo markii dagaal goosad goos goos ah halkaas ka dhacay 1994.
Previous articleTurkey is sending peacekeepers to Azerbaijan to monitor a ceasefire
Next articleFantastic screen from Ecuador in the World Cup qualifier beats Colombia
Saciid Deni “Puntland waxay ku jirtaa heegan buuxa, ficilkii dhacayna waxaa uga falcelineyna…”